Akụkọ - Ngwọta maka ụlọ
Ebili - eleda anya
A na-eleda anya dị elu mgbe niile. Ngwunye volta ndị a (nke na-agafe agafe) nke na-ewe nkewa nke abụọ na-akpata site na ọkụ, ọkụ dị nso na nke dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ ịgbanwe ọrụ nke ịba uru.
Igwe na-egbu ọkụ na nso nso
Direct ma ọ bụ ọkụ ọgbụgba ọkụ dị nso bụ ọkụ na-agba n'ime ụlọ, na nso ya nso ma ọ bụ n'ahịrị na-abanye n'ụlọ ahụ (dịka sistemụ ọkụ eletriki dị ala, ekwentị na usoro data). Njupụta na ike ọdịnaya nke ihe na-esi na ya pụta na ike mmụọ yana ya na mpaghara electromagnetic metụtara (LEMP) na-eyi usoro ahụ egwu.
Igwe ọkụ ọkụ nke sitere na bọmbụ ọkụ na-ebute n'ime ụlọ na-ebute ịrị elu nke ikike nke ọtụtụ 100,000 volts na ngwaọrụ ụwa niile. A na-eme ka ndị na-eme ihe ike site na ndọtị voltaji na mgbochi ụwa na mbilite nke ụlọ ahụ gbasara gburugburu. Nke a bụ nrụgide kachasị elu na sistemụ eletriki na ụlọ.
Na mgbakwunye na ụda voltaji na mbibi nke ụwa, mgbatị na-apụta na ntinye eletriki nke ụlọ ahụ yana sistemụ na ngwaọrụ ndị ejikọrọ n'ihi nsonaazụ nke ọkụ ọkụ electromagnetic. Ike nke ebili mmiri ndị a na-ebute na mmiri na-esi na ya pụta dị ala karịa nke mkpali ọkụ ọkụ na-agba ugbu a.
Ime àmụmà na-ada
Ime àmụmà dịpụrụ adịpụ bụ àmụmà na-ada n'ebe dị anya site na ihe a ga-echedo, na netwọọdụ na-ajụ-nke ọkụ eletrik ma ọ bụ na nso ya yana igwe ojii na igwe ojii.
Ọrụ ịgbanwere nke ọrụ ọrụ ike na-akpata nsị (SEMP - Switching Electromagnetic Pulse) nke ihe dị ka 1,000 volts na sistemụ eletriki. Ha na - eme, dịka ọmụmaatụ, mgbe a na - agbanyụrụ ibu (dịka ndị na - agbanwe ọkụ, ọkụ ọkụ, moto), na - agbanye ọkụ ma ọ bụ na - eme njem. Ọ bụrụ na awụnyere ikike na data data na ihe yiri ya, enwere ike itinye aka ma ọ bụ bibie usoro sistemụ.
Nchedo nke ike ọkọnọ na sistemụ data
Mbibi na-ebibi ihe na ebe obibi, ọfịs na ụlọ ọrụ nchịkwa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ike ime, dịka ọmụmaatụ, sistemụ ike, sistemụ teknụzụ ozi na sistemụ ekwentị, sistemụ njikwa nke ụlọ ọrụ mmepụta site na ọdụ ụgbọ na ndị na-achịkwa ikuku ma ọ bụ sistemụ ọkụ. . Enwere ike ichebe usoro ndị a dị nro site na echiche nchebe zuru oke. N'ebe a, ojiji a na-achikota nke ngwaọrụ nchedo (ugbu a na ndi mmadu jidere oku) bu ihe kachasi mkpa.
Ọrụ nke ndị na-ejide ọkụ ugbu a bụ ịhapụ ike dị ukwuu na-enweghị mbibi. A na-etinye ha dị ka o kwere mee ruo ebe usoro eletrik na-abanye n'ime ụlọ ahụ. N'aka nke ọzọ, ndị na-ejide ha, na-echebe ngwá ọrụ ndị na-enweghị isi. A na-etinye ha dị ka o kwere mee na akụrụngwa ka echedoro ha.
Site na ezinụlọ ngwaahịa Red / Line maka usoro ọkọnọ ike yana ezinụlọ ngwaahịa Yellow / Line maka sistemụ data, THOR na-enye ngwaọrụ nchebe na-arịwanye elu. Pọtụfoliyo modular ahụ na-enye ohere kachasị nke mmejuputa atumatu nchedo maka ụdị ụlọ na nha echichi niile.